Warbixin ku saabsan naceybka xagjirka. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliska Iswiidhan oo dad qabqabtey
Warbixin ku saabsan naceybka xagjirka.
La daabacay tisdag 7 juli 2009 kl 10.45
Wasiirka isdhexgalka iyo sinaanta ee dalkan Sweden Nyamko Sabuni, ayaa loogudbiyey warbixin qaylo dhaan ah oo lagu soo aruuriyey dhibaatooyinka ay geeystaan garabyadda xagjirk ah.
Warbixin ku saabsan naceeyb xagjirka.
Wasiiradda isdhexgalka iyo sinaanta ee dalkan Sweden Nyamko Sabuni, ayaa lagudoonsiiyey warbixin qaylo dhaan ah oo lagu soo aruuriyey dhibaatooyinka ay geeystaan garabyadda xagjirk ah.
Kuwaas oo labo dhinac laah, waa kuwa garabka bidix ee u arka inaan sinaani jirin iyo kuwa aaminsan fikradaha ka badbadiska ee naceeybka kala soocida adamaha iyo kan shisheeyaha.
Warbixintaan oo ay soo aruuriyeen booliiska amniga ee Iswidhan Säpo iyo hey'adda ka hortagga dembiyada ee loo yaqaano Brå, ayeey ku cadahay in labada garab garabka midig uu yahay mid siyaasad salka ku haya, ishana lagu hayo meesha kan garabka midig uu yahay mid marba marka kale soobadana haya isla markaana dhibaatooyin ugeeysana haya goobaha kulimada iyo daka horjooga yaashaa. Meesha garabka midigi ay siyaasad fuliyaan ayna xeel dheer wataan.
Labada garaba waxaa u badan dhalin yaro da'doodu u badan tahay labaatan jir iyo wax ka yar. Garabka midig ayeey gabdhuhu ku yar yahiin halka garabka bidix ay ku badan yahiin.
Dhalinyaradda ayaa gala danbiyo kala duwan, halka garabka midig ay inta badan ay u geeystaan dhibaatooyin dadka ay takoora hayaan iyo danbiyada isdabo mariska, adeegsiga ka ganacsiga maandooriyaha iyo waliba dhacida bangiyada. Halka kooxaha garabka midig ay galaan danbiyadda buruburinta goobaha muhiimka ah iyo fidneynta kulamadda furan, taas kor u qaadeeysa diiwaangelinta dembiyada dhalin yaradda labaatan jirka ah.
Wasiiradda isdhexgalka iyo sinaanta Nyamko Sabuni ayaa u arkata ineysan aheyn mid laga naxo xagjirnimadda gabka bidix, balse loo baahan yahay in indhaha lafuro lalana socdo, waayo tan garabka midig waa mid taariikh dheer leh lagana dharagsan yahay siyaasadooda xagjirnimadda ah.